Ahoana no fomba hakana mpitaona, mpitoraka bilaogy, na mpanao gazety | Martech Zone
Ahoana ny fomba fametahana Influencer, Blogger, na mpanao gazety
Alakamisy, Aogositra 13, 2020 Alakamisy Febroary 25, 2021 Douglas Karr
Taloha dia efa nanoratra momba izany aho ahoana ny TSY mametraka bilaogera. Mitohy ny saga rehefa mahazo onjam-peon'ny fifandraisana amin'ny olona tsy vonona aho izay tsy manana ny vaovao ilaiko hampiroboroboana ny vokatra na serivisin'izy ireo.
Elaela vao nahazo pitch izay mendrika haseho. Nahazo mailaka avy amin'ny mpahay tetikady media sosialy miaraka amiko aho Supercool Creative. Supercool dia maso ivoho mamorona manokana amin'ny famoronana sy famokarana horonantsary an-tserasera, marketing marketing, famafana horonantsary, fampielezan-kevitra amin'ny tambajotra sosialy, horonantsary viral, fialamboly marika ary tranokala. Ity dia mailaka tsy mampino!
Mampiavaka ny Pitch Blog Mahaliana
Ny pitch dia manokana. Mahazo tapaka lamba sy paty aho matetika. Hamafana ireo vala ireo avy hatrany aho. Raha tsy azonao fantarina hoe iza aho, nahoana aho no hihaino anao?
Ny pitch fohy milaza amiko ny vaovao. Ny ankamaroan'ny olona PR dia manapaka fotsiny ary mametaka fanambarana an-gazety mahatsikaiky ao amin'ny vatan'ilay mailaka.
Manome ahy a ny pitch notsongaina hiditra mivantana ao amin'ny bilaogiko!
Ny pitch dia misy rohy mankany amin'ny tena tantara (sy toerana ahafahako manondro sy manondro ireo mpitsidika ahy).
Ny pitch milaza amiko fomba samihafa Azoko ampiasaina ilay fampahalalana! Tamin'izay aho no nitomany ... nitsoaka. Alaivo an-tsaina hoe… mba hitsitsiana fotoana, dia efa nieritreritra ny fomba mety hanaovan-javatra i Darci… ary nanampy fanamarihana hifandray aminy raha manana fanontaniana aho.
Manome ny pitch lafika amin'ny manam-pahaizana ary ny antony maha-zava-dehibe ny fihainoana azy.
Mihidy miaraka amin'i Darci's ny pitch tena anarana, lohateny ary orinasa (izay izaho aza niandrandra!)
Ny pitch dia manana hiala Anarana! Matetika ny olona PR dia mandefa mailaka tapaka sy mametaka avy ao amin'i Outlook - mivantana fanitsakitsahana ny hetsika CAN-SPAM.
Ity dia mailaka akaiky indrindra… Hamboariko ho B + mafy io. Ny hany fampahalalana kely fotsiny tsy hita dia ny fitsangantsanganana izay tsy heveriko fa olona PR marobe no mikarakara azy ireo - saingy tsara ny naheno ny antony nahatonga azy hifandray tamin'ny mpihaino ahy. Teny vitsivitsy monja ao amin'ny mailaka toa
tsikaritro Martech Zone efa niresaka momba ny horonan-tsary sy media sosialy taloha, ka nieritreritra aho fa hahaliana anao izany…
Tags: pitch pitchahoana ny fampiakaranaahoana ny fametrahana bilaogeraahoana ny fametrahana mpanao gazetyAhoana ny fametrahana ny influencerfetin'ny mpanao gazetydityinfluencersupercool famoronanasupercoolcreative
ClickMeter: Fanarahan-dia Rohy fampielezan-kevitra, fanarahan-dia Affiliate, ary fanaraha-maso ny fiovam-po
16 Jiona 2011 à 7:44
Misaotra nizara ity - tena mahaliana. Amin'ny maha olona mipetraka eo amin'ny fefin'ny PR, ary amin'ny maha mpitoraka blaogy ny tenako (na dia tsy dia zava-dehibe loatra aza mba hidina!), dia tena manampy tokoa ny mahita ny karazana pitches izay miasa. Fotoana fianarana lehibe, ka misaotra!
Ny zavatra iray mahagaga ahy dia ny teboka 5. Mitantana ekipa PR/Marketing kely aho nefa mahomby ho toy ny asako isan'andro, ary indraindray dia mahazo ity karazana pitch ity (ary mahalana, manao azy ireo ihany koa).
Ao amin'ireo tohatra nataoko dia tsy nampidiriko mihitsy ny karazana fampahalalana voarakitra ao amin'ny teboka 5, satria heveriko fa ireo olona natsangako dia afaka mieritreritra ireo zavatra ireo ho an'ny tenany manokana - ary tsy te hilaza amin'izy ireo aho hoe ahoana. mba hanao ny asany (toy izany koa aho somary sosotra rehefa manao izany amiko ny olona).
Na izany aza, ny lahatsoratrao dia mahatonga ahy hieritreritra indray io toerana io!
Miombon-kevitra tanteraka amin'ny fampifandraisana manokana aho na izany aza - tena zava-dehibe indrindra raha jerena ny toetran'ny fifandraisana 'maoderina' mifandray.
Noho izany, misaotra indray!
Jun 16, 2011 ao amin'ny 12: 41 PM
Raisiko ny hevitra tsy mitovy hevitra eto. Inona no ifandraisan'ny lahatsary politika sy ny marketing ara-tsosialy ara-politika aminao na ny bilaogy Marketing Tech? #1 fa tsy "personalized" azo antoka fa misy ny anaranao ao anatiny fa iza no tsy afaka miditra an'izany ary manafatra azy ho any amin'ny mailaka (heveriko fa ny mpampiasa anao taloha no mahay an'izany) #5 Miombon-kevitra tanteraka amin'ny interacter aho momba ny tsy fametrahana izany info izany dia tokony ho fantatrao ny fomba tsara indrindra hampiasana ny vaovao ho an'ny mpihaino anao fa ny rohy mankany amin'ny bitsika dia hevitra tsara. Amin'ny ankapobeny, satria ny ankamaroan'ny resaka PR hafa dia tsy mahatsara izany, dia mahatonga azy ho kely kokoa noho ny hafa. Tsara kokoa ny manatona olona eo amin'ny sehatra politika raha ny hevitro.
Amin'ny maha-olona izay mivarotra ny tenany ho viraliny na inona na inona dia very ny fahatokisana ahy (fa mety hahazo fikarohana sy maso amin'ny fampiasana an'io teny io)
Jun 17, 2011 ao amin'ny 3: 26 PM
Mifandray tanana ny politika sy ny varotra, Chris. Miady hevitra aho fa ny varotra no nahatonga an'i Obama teo amin'ny toerany. Nolanin'ny mpifidy ny 'fanentanany' fanantenana sy fiovana. Tena nahavariana ny fampiasan'ny mpanaraka sy ny influencer azy, tena hetsika avy amin'ny fototra. RE: #1, mitovy hevitra aminao aho. Ny tiako holazaina dia hoe tonga nijery anay i Darci talohan'ny nandefasana azy… zavatra tsy ataon'ny ankamaroan'ny orinasa PR marobe.
16 Okt 2014 amin'ny 7:22 PM
Doug, ahoana no hanoroanao olona iray hamorona rohy hisafidy ho an'ny mailaka raha nosoratana ho an'ny olona iray fotsiny (bilaogera na mpanao gazety) ary alefa amin'io olona iray io ary tsy mifandray amin'ny lisitra ao amin'ny sehatra fivarotana mailaka?
Ny ankamaroan'ny olona PR ara-dalàna dia tsy mandefa mailaka faobe ka tsy haiko hoe ahoana no mety hisian'ny fialana. Mazava ho azy fa raha misy orinasa misoratra anarana anao amin'ny mailaka ara-barotra (tsy misy fidinao), dia tantara hafa izany.
16 Okt 2014 amin'ny 7:53 PM
Salut Carri! Raha ny marina dia maro amin'ireo olona PR ara-dalàna no mandefa mailaka faobe. Ny ankamaroan'ny sehatra PR dia mamela anao hisafidy ny mpanao gazety sy bilaogera rehetra ary avy eo mandefa. Ny sasany, toa an'i Meltwater (mpanohana) dia manana endri-javatra tsy misoratra anarana amin'ny sehatra misy azy fa ny ankamaroan'ny hafa dia tsy manao izany. Raha tsy manana fifandraisana ara-barotra ianao, dia tena mila programa izay hampiditra ny filatsahana. Outlook sy Gmail dia tsy manapaka izany fotsiny. Heveriko fa ny iray dia ny fampiasana fitaovana toy ny Formstack ary mameno endrika fotsiny ny olona (na Google Form amin'ny takelaka)… saingy sarotra ny manara-maso izany.